Kitapo marika, kitapo ho an'ny mpianatra, kitapo an-tsekoly kitapo fitsangatsanganana, mpamatsy, fanamboarana orinasa China - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Vokatra mifandraika amin'ny biby
Kitapo kitapo saka
Kitapo fisakafoanana antoandro ho an'ny olon-dehibe
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2005. Manaraka akaiky ny firoboroboan'ny indostria sy ny fitantanana mifantoka mandritra ny taona maro. Izy io dia nanjary orinasa lehibe iray mampifangaro ny R&D, ny famolavolana, ny famokarana ary ny fivarotana valizy sy kitapo. Iray amin'ireo mari-pamantarana faratampony amin'ny indostrian'ny entana. Izy io dia nitombo avy amina olona am-polony tamin'ny fiantombohan'ny niorenany ka lasa orinasa mpanangom-bokatra lehibe misy mpiasa mihoatra ny arivo, velaran-trano mirefy 80 000 metatra toradroa mahery, ary vokatra 6 tapitrisa isan-taona .Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. dia nitazona hatrany ny toe-tsain'ny orinasa "tsy fivadihana azo antoka, mpiara-miasa boaty tso-po", mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny fiaraha-miasa amin'ny "tombon-tsoa, ​​fifanajana ary fahatokisana, fampandrosoana ary fandresena" ary " vokatra tsara, serivisy tsara, mpanjifa tsara, ary fahatokisana «Toro lalana« Tsara », fampandrosoana sy fanavaozana mitohy, mitarika ny fironana amin'ny indostrian'ny entana. Daguan Zhihao Handbag Industrial Co., Ltd. dia namokatra hatrany: ny kitapo fandraharahana, kitapo solosaina, kitapo fialamboly, kitapo kitapo, kitapo, kitapo fitsangatsanganana, kitapo tendrombohitra ary vokatra am-paosy mahazatra ary kitapo antontan-taratasy, fidiovana kitapo, valizy, hidy tenimiafina, sarontava maso, tanany hatoka, fonosana boaty, pendants ary valizy sy kojakojam-pitaovana hafa
Ireto kitapo fitaovana tsy misy rano ireto dia tsy afaka miaro ny fitaovanao sy manampy anao hitondra azy ireo mora foana, fa mitazona ny fitaovanao / zavatra hafa ho maina. Ilaina indrindra izany dia mitondra elektrisianina mampiasa fitaovana fanamainana, mpamaky izay mila mitazona ny fitafiana ho ......
Ny paosin-tratra, niantso koa hoe paosin'ny valahana na paosy andilany, dia efa niampita ny tsipika avy amin'ny kojakojam-pitaterana efa lasa ela be. Ankehitriny dia nanjary safidy azo ampiharina izy io, toy ny kitapom-batsy toy ny kitapom-batsy. Misy antony lehibe mahatonga an'io: ny kitapo andilan......
Ny lamba ivelany an'ny kitapo trolley ho an'ny mpianatra dia vita amin'ny lamba Oxford nilamina matevina. Ity fitaovana ity dia manana tanjaka matanjaka sy mpanohitra ny abrasion. Ny hakitroky ny lamba sy ny famonoana rano dia mety hisorohana ny orana tsy hilentika ao anaty kitapo. Ao anatiny, io fi......
Kitapo duffle ho an'ny vehivavy
Kitapo andilany vehivavy
Kitapo kitapo bisikileta
Rihana faha-3, No.187 Xinyi Road, Jilian Community, Qiaotou Town, Dongguan City, Provinsi Guangdong